Realme anga achimhara kuburikidza neimwe indaneti inoderera. Yakakwira kuve inozivikanwa nemafoni anopa kukosha kwakanyanya kwemari, achizadzisa izvi nekudzora marozari emubhadharo kunyange pazasi izvo Xiaomi anoti zvinoshanda kwazviri. Kukura kwakaita Realme kakawanda kupfuura gore rakapfuura kunoratidza kuti mhando iri kuwana kutariswa kwakawanda mumisika inotenderera pasirese apo dhairekitori yavo yakashanduka zvakanyanya kubva pakuva kungoda nezve mafoni epakati kusvika kune sarudzo mune zvese zvikamu zvemutengo. Iyo kambani yakaputira gore pane yakakwira chinyorwa nekutanga yemutambo-centric Realme X2 (yedu yemitambo kuongorora), mureza muurayi Realme X2 Pro (kuongorora kwedu), uye tikiti yavo kune mararamiro chigadzirwa musika ie vaviri yechokwadi isina waya isina tsvina nzeve. Nhasi, Realme iri kusheedzera yavo yekutanga 5G powered runhare - Realme X50 5G ine gomba-punch kuratidza, Quad makamera, uye zvimwe.
Realme anga achidurura bhinzi paRorme X50 5G zviri pachena kweanopfuura mwedzi zvino. Mune akatevedzana vetiers, iyo kambani yakaratidza kukosha kwakanangana nezve smartphone inosanganisira kuzarurira kutsvagura nezve dhizaini yayo uye processor yayo. Zvichakadaro, rondedzero ichangobva kuwanikwa pane webhusaiti yeChinese regulator TENAA yakaburitsawo ruzivo rwakawanda nezve smartphone, iyo yese yakasimbiswa nekuzivisa kwepamutemo.
Realme X50 5G: Nhaurwa
6.57-inch gomba-punch FHD LCD
120Hz, 20: 9 chimiro chiyero
Yekuchengetedza Type tsva
30W VOOC 4.0 kukurumidza kuchaja
Fingerprint Sensor Rutivi-rwakasimudzwa zvigunwe zvemunwe
64MP Samsung ISOCELL GW1 yekutanga sensor, f / 1.8
8MP 119 ° yakakura-angle sensor, f / 2.3
12MP 2X telephoto, f / 2.5
2MP macro kamera, f / 2.4
8MP 105 ° yakakura-angle sensor, f / 2.2
Android Version Realme UI yakavakirwa paApple 10
Iyo Realme X50 inouya ine 6.57-inch LCD kuratidzwa ine yakanyanya zororo zororo re 120Hz, iri kusvetuka kukuru kubva ku90Hz iyo yakatangwa paRealme X2 Pro. Iyo inoratidzawo ine gomba-punch dhizaini, kugovera nzvimbo kumusoro kumusoro kuruboshwe kune maviri selfie kamera. Iyo ine iyo 20: 9 chimiro chiyero uye inodzivirirwa neGorilla Girazi 5. Uyezve, kune chikamu-chakaiswa chigunwe chigunwe scanner yakafanana neiyo Redmi K30 5G.
Realme X50 inouya mune miviri mavara yakafuridzirwa nechando pamwe nemvura yegungwa. Ose maviri mavara akasiyana anouya ne 3D holographic kumashure dhizaini iyo inoshandura ruvara nekukosha kwechiedza chakawira pamusoro payo.
Kana zvasvika pakutsigirwa kwe5G, iyo onboard Qualcomm Snapdragon 765G nharembozha inowoneka inotsigirwa kune isiri-simalone (NSA) pamwe chete neSalalone (SA) 5G network. Runhare runotsigira N1 uye N41 5G NR frequency band kweSA uye N78 uye N79 yeNSA. Iyo inouyawo nehuviri-frequency GPS, yekumusoro yakarongedza kurongeka, pamwe neNFC.
Realme projekiti 5G sechinhu chakakosha pamhepo yekutamba ye smartphone pamhepo uye kunze kweiyo chipset nyowani, Realme inofambidzana neNetEase Cloud Magemhu, kambani inopa mitambo-yakavakirwa gore mitambo inogona kuridzwa kuburikidza neimwe chete app pasina kudhanilodha mutambo wega wega zvakasiyana. Parizvino, portfolio yayo inonyanya kuve nemitambo yemafoni asi website yayo ine chikamu chemitambo yePC, ichidudzira kuti tingaona sevhisi yakafanana neGoogle's Stadia mune ramangwana. Ramba uchifunga kuti ichi chinogona kunge chiri China-chete chimiro, sezvo chiitiko chemazuva ano chekutanga chinotarisana nemusika weChina chete.
Kupfuurirazve, kambani iyi yakagadzirisawo yayo Game Boost ficha kuti ivandudze mutambo unozowedzerawo kutsikisa GPU inopa pamwe neyakagadziridzwa chiyero chekuratidzira kudzivirira chero jank kana jitter paunenge uchitamba. Uyezve, pane 8mm yemhangura pombi yekuitisa kupisa kure kubva kubhodhi.
Kana zvasvika pamamera pane Realme X50 5G, Realme anga achisveta iyo Quad-kamera setup. The TENAA nhamba yakaratidzawo kugadziriswa kweavo akasiyana ma sensors asi chiziviso chepamutemo chinojekesa chinangwa cheumwe neumwe wavo. Kune 64MP Samsung ISOCELL Yakajeka GW1 seyo sensor yekutanga, kamera ye12MP telephoto ine 2X zoom, kamera inosvika 8MP pakona, uye 2MP kamera yakagadzirirwa macro kupora. Iyo kamera inouyawo neyepamberi Night mode uye kutsigirwa kweRAW kutora mafoto. Makamera maviri ari kumberi anosanganisira 16MP Sony IMX471 yekutanga sensor uye 8MP yakafara-kona sensor.
Iko kune 30W VOOC 4.0 kubhadharira iyo 4,200mAh bhatiri pane Realme X50 5G. Izvi zvinobatsira bhatiri raja 70% mumaminetsi makumi matatu chete.
Iyo Realme X50 inouya mumatatu akasiyana - 8GB / 128GB, 6GB / 256GB, 12GB / 256GB. Iyo RAM / kuisirwa masisitiro anooneka asina kujairika asi mitengo iri kutaridza kuti ichi chinangwa.
Realme X50 5G Master Chinyorwa
Realme akambobatana zvakare nemugadziri wefekitori wechiJapan Naota Fukusawa uyo akambogadzira Master Editions yeiyo Realme X uye Realme X2 Pro. Panguva ino, tenzi wekugadzira akavhomora kukurudzira kwake kubva pakuratidzwa kwechiedza pane zvakapfava simbi. Kune maviri matsva akasiyana mune Realme X50 5G's Master Edition - imwe ine gidhi yematanho ikadzokorora gradient kubva yakajeka kune yakasviba masimbi maficha, ichichinja kupenya nekona yechiitiko chechiitiko, nepo imwe yacho ichigadzirwa negeji discs ine accentuated yakasanganiswa circric denderedzwa pane yega yega inoita kuti yega disc iite senge vinyl.
Realme yakazivisawo Realmeme UI yayo, iyo yakavakirwa pavabereki OPPO ColorOS 7. Pachinhanho, mukuru wekambani wekushambadzira Xu QI Chase akataura kuti zviratidzo zvakagadziridzwa kuchengetedza kufanana kwechimiro mupfungwa. Nheyo yeGoridhe Ratio (yakavakirwa paFibonacci Series) yakashandiswa kuisa makiyi ekuona zvinhu pamwe negridi pane icon.
Realme UI maitiro (akashandurwa achishandisa Google Lens)
Realme UI yakavakirwa paAndrew 10 uye inouyawo neapamhepo mapurogiramu akadai seRealme Pay. Pamusoro pezvo, Realme inotaura kuti kumhanyisa kweapp app kwakawedzera ne25%, hupenyu hwebhatiri ne10%, uye kuita zvemitambo ne20%. Uyezve, iyo nguva yekubata inobata yakatemwa ne 35%.
Pamusoro pezvo, Realme UI inouyawo neiyo Focus Mode iyo inofanirwa kukubatsira kuti urege kubva pasi yedhijitari uye ubatane zvakare nenyika yepanyama.
Realme X50 5G ndiyo yekutanga smartphone kubva kukambani yekuuya neReanme UI kunze-kwe-kwebhokisi. Dzimwe nhare dzinotarisirwa kugashira izvi nekuuya Anogadzirisa Android 10.
Mushure mekuzvirongedza seyemhando yehupenyu, Realme yakagadzirira kutanga yayo yega ecosystem yeAI-powered IoT zvishandiso. Mumwedzi inouya, Realme ichavhura yakangwara TV, zvipfeko, uye zvimwe zvigadzirwa zvezwi - zvine mukana neAI yayo mubatsiri wakavakirwa-mukati.
Realme Buds Mhepo Inokosha Edition
Iyo Realme Buds Air TWS mashebe emukati yakatoziviswa nekambani asi kuvhurwa kweChina kwakawona ruvara rwakasiyana rweiyo Realme Buds Air kesi. Izvi zvinosanganisira zvinotaridzika sokunge kuti rakapetwa kupedzisa pamwe chete neRorme's "R / r" logo yakasaswa kutenderera pasi rese. Iyo kesi zvakare ine loop kuitira kuti iwe unogona kuibatanidza nayo, pamwe, keychain.
Mutengo & Kuwanika
Iwo matatu akasiyana eiyo Realme X50 5G ari mutengo unotevera:
8GB / 128GB - CNY 2499 (~ $ 360)
6GB / 256GB - CNY 2699 (~ $ 390)
12GB / 256GB - CNY 2999 (~ $ 430)
12GB / 256GB Master Edition - CNY 3099 (~ $ 450)
Iyo Realme Buds Air earbuds yakavezwa mutengo pa CNY 399 (~ $ 60) asi ichave iripo yekutanga kuwanikwa CNY 369 (~ $ 55).
Iyo Realme X50 5G ichave iripo yekubhadhara-kare kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana dzepa online kutanga nhasi, Ndira 7, uye unozotengesa uchitanga muna Ndira 14th.
The post Realme X50 5G ine 120Hz mbiri mbiri hole-punch kuratidza, Snapdragon 765G, Realme UI inotanga muChina yakatanga kutanga xda-vatadzi.